Maxkamadii Maydka La soo Taagay! | Dhaymoole News
Maxkamadii Maydka La soo Taagay!
May 29, 2019 - Written by wariye999
Mr.Lorenzo Castelli ayaa dhintay, ka dib markii uu jiidhay tareenku sannadkii 1977 Dalka Talyaaniga. Sida caadiga ah waxay ahayd in maydkan uu yahay ka dhibanaha ah oo aan wax dembi lagu leeyahay aanu jirin.
Laakiin shilkan geeridiisa ayaa keenay in dib u dhac ku yimaado saddex tareen oo kale oo danbeeyay, kuwaasi oo noqday taariikhda dunida markii ugu horaysay ee tareen uu dib u dhaco 30 daqiiqo. Sidaas darteed shirkadda maamulaysay khadadka tareenada ee dalka Talyaaniga ayaa maydkaasi ka dacwaysay iyo inuu sabab u ahaa isagu dhibaatada macmiilka tareenada ku dhacday.
Maxkamadda ayaa amartay in Maydka eedaysanaha ah la keeno maxkamadda oo weliba lagu fadhiisiyay kursiga eedaysanaha iyadoo loo qabtay looyaro difaacaya Maydka.
Looyarada maydka difaacayay ayaa ku dooday in Maydkani uu ku waayay shilkaasi naftiisa, taasi oo ka muhiimsan dooda shirkadda, halka shirkadu ay hanta kooban iyo sumcad kaga doodayso. Arrintan ayaa lagu daray arrimaha (strangeness) yaabka leh ee ka dhaca dunida.